यसकारणले आएका हौं एकतामा ? (हेर्नुस् भिडियो) | सहारा टाइम्स
Home » Politics » यसकारणले आएका हौं एकतामा ? (हेर्नुस् भिडियो)
यसकारणले आएका हौं एकतामा ? (हेर्नुस् भिडियो)
saharatimes Thursday, June 16, 20160No comments
पुँजीवाद पुरानो विचार हो भने माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद नयाँ विचार हो । पुरानो विचारले नयाँ शक्ति निर्माण हुँदैन । न मधेशीयावादले देशको उन्नति गर्न सक्छ न पहडियावादले देशको उन्नति गर्न सकिन्छ । सबैका लागि एउटै वाद हो त्यो हो माओवाद ।
माओवादीले मात्र मधेशको मुक्ति हुन्छ । मधेश आन्दोलनमा मधेशी दलले माओवादीलाई बोल्न नदिने, केही गर्न नदिने । हाम्रा साथीले पनि डराएर छोड दिनुस् न भन्नुहुन्थ्यो तर मैले छाडिनन् । हामीले मधेश आन्दोलनमा पनि माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवादमा बसह गरेकै हो । माक्र्सवाद, ललिनवाद र माओवादले मात्र मधेशको मुक्ति गर्छन् भने कुरा गाउँ गाउँ टोलटोल गएर भनेकै हो । जमिन्दाहरुबाट मधेशको मुक्ति हुँदैन भनेका हौं ।
राष्ट्रिय स्वभिमानका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ र राष्ट्रिय एकताका लागि मधेशको सम्बोधन आवश्यक छ । मधेशको सम्बोधन नगरि राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव छैन । मधेशको समस्या समाधान भएन भने मधेशलाई टुट्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसलाई रोक्ने शक्ति माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवादमा मात्र रहेको छ र त्यसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले नगरेसम्म सम्भव छैन । त्यसमा नै विश्वास गरेर हामी एकतामा आएका हौं ।